September 2012 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
IDM နဲ့ ဖိုင်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားများကို Download လုပ်နည်း
Maung Pauk at 8:13:00 PM 1
Internet Download Manager ဟာ Download လုပ်ရာမှာ ထင်ရှားလှတဲ့ Software တစ်ခုအဖြစ် လူတိုင်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သူက Support မပေးတဲ့ဖိုင်တွေရှိနေတတ်ရင် Windows ရဲ့ Default Download အဖြစ်နဲ့ပဲ နှေးနှေးလေး ဒေါင်းရတတ်ပါတယ်။ Internet Download Manager မှာ တကယ်တော့ ဒေါင်းချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားများကို ဖြည့်ပေးလိုက်ရင် သူကဒေါင်းပေးမှာပါ။
1.Internet Download Manager ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
2.Tool Bar ပေါ်မှာ Option ဆိုတာလေးတွေ့လားခင်ဗျာ... စက်သွားနှစ်ခု Icon လေးလေ... အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
3.ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲက File Type ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရေးထည့်လိုက်ပါ။ အမျိုးအစားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြားမှာတော့ Space bar ခြားထားဖို့ မမေ့စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ...
ကဲဒါဆိုရင်တော့ Internet Download Manager က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားကို သိသွားပါပြီ...
Blog Template အစားထိုးနည်း
Maung Pauk at 5:39:00 PM 3
ဒီပို့စ်ကို shikamaru မေးထားတာလေးအတွက် ရေးပေးတာပါ။ အခြား ဘလော့ဝါသနာအိုး အသစ်တွေလည်း သိအောင်ပေါ့ဗျာ....
1. ပထမ ကိုယ့် Blogger ထဲကို Sign in ၀င်လိုက်ပါ။
2. My Blogs ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Template ဆိုတာကိုတွေ့ရဲ့လား။ အဲဒါကိုတစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။
3. Screen ရဲ့ ညာဘက်နားမှာ Backup/Restore ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
4.အခု Template ကို အစားမထိုးခင် ကိုယ့်လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Template ကို သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုမယ်လေ။ ဒါမှ အဆင်မပြေလို့ ကိုယ့် Template ကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ပြန်ရအောင်ပေါ့။ Download Full Template ကိုနှိပ်လိုက်
5.အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့် Template ကိုသိမ်းပေးဖို့ ဘောက်ကျလာမယ်လေ။ Save ကိုရွေးပြီး OK ပေါ့။
6.ခဏကြာရင်တော့ ပြီးသွားပါပြီ။ အခု Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်အစားထိုးမယ့် Template ရှိရာထဲက .xml ဖိုင်ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Open ပေါ့...
7.ကဲ အခုနေများ Upload ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး ခဏစောင့်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ကို Template အစားထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်...
Computer စာအုပ်များ e-books
Maung Pauk at 2:28:00 PM 1
PC ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ပစ္စည်းများကို သုံးပြီး ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများ၊ A+ ကိုလေ့လာလိုက်စားနေသူများ သိသင့်တာတွေကို ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘယ်လို တပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို လွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာပါ....
Maung Pauk at 6:06:00 PM 0
ဒါက Dilegno-Star Template ပါ....Blogger မှာသုံးဖို့ပါ
1.Sign in blogger.
2.Templates ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်နားလေးမှာ Backup/Restore ကိုနှိပ်
3.Browse ထဲက မိမိတန်းပလိတ်ရှိတဲ့ xml ဖိုင်ကို ရွေး
အပေါ်က တန်းပလိတ်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Google Chrome မှာ မြန်မာစာပေါ်အောင် လုပ်မယ်
Maung Pauk at 2:21:00 PM 3
1.Google Chorme ကိုဖွင့်ပြီးရင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားလေးမှာ ရှိတဲ့ Setting ကိုနှိပ်ပါ
2.ကျလာတဲ့ Drop Down menu ထဲမှာ Setting ကို ထပ်နှိပ်ပါအုံး
3.အဲဒါဆိုရင် Setting ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
အဲဒီထဲက Web content ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို ရှာပါ။ တကယ်လို့များမတွေ့သေးရင် Show Advanced Setting ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
4.Web content ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ အောက်မှာ Customize Fonts ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
5.ပေါ်လာတဲ့ဘောက်မှာ ရှိတဲ့ Font အားလုံးကို Zawgyi-One ပြောင်းပစ်လိုက်ပေါ့
6.ပြီးရင် Scroll ကိုဆွဲပြီး အောက်နားမှာ Encoding ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါမှာ Unicode(UTF-8) ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။
7.ဇော်ဂျီပြောင်းပြီးပြီဆိုရင် တော့ OK နှိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် Google Chrome Browser မှာ မြန်မာစာနဲ့ရေးတဲ့ ဘလော့၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် များကို ကောင်းစွာ
Maung Pauk at 4:41:00 PM 4
ဘလော့ ဒါမှမဟုတ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ရဲ့စာမျက်နှာကို ၀င်ကြည့်ပြီးရင် အဲဒီအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး Comment တစ်ခုခုပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ တစ်ချို့ မသိကြပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဒီပို့စ် ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကိုနေမင်းမောင်ရေးထားတာပါ။
Comment ပေးချင်သူအတွက် ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာ ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကိုယ် comment ပေးချင်တဲ့ ပို့စ် အောက်ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Profile ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Gmail အကောင့်ထဲကို လက်ရှိဝင်နေပြီးသားဆိုရင်တော့ Comment as ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ့် Gmail အကောင့်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတဲ့အတွက် ထပ်ရွေးစရာမလိုပါဘူး....
ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ Comment ပေးတက် သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ - နေမင်းမောင်
Maung Pauk at 1:20:00 PM 0
Blog/Website ဆိုင်ရာစာအုပ် e-books
Maung Pauk at 8:09:00 PM 0
Facebook အသုံးပြုနည်းအကြောင်း မြန်မာလိုရေး ပေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ။
Facebookအကောင့် တစ်ခု ဖန်တီးပုံကစပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေကို ဖန်တီးခြင်း၊ Share လုပ်ခြင်း
စတဲ့အကြောင်းတွေကို သေသေချာချာ ရေးသားထားပါတယ်။ Facebook အကြောင်းလေ့လာလိုသူများ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်....
Maung Pauk at 4:36:00 AM 3
Microsoft Access 2010 အကြောင်း စုံလင်စွာရေးသားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ Database တည်ဆောက်ခြင်း အဆင့်ဆင့်နဲ့ SQL တွေ Program ရေးသားပုံကို ပါဖေါ်ပြပေးထာပါတယ်။ Database Programmer တို့ နှစ်သက်မယ့် စာအုပ်ကလေးပါ။ လိုချင်သူများ ဒေါင်းနိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်...
Maung Pauk at 4:16:00 AM 0
Wordpress ဆိုတာ website ရေးသားရာမှာ ထင်ရှားလာတဲ့ Software တစ်ခုပါ။ Adobe Dreamwaver တို့လို Joomla တို့လို သူလည်း ဘလော့ရေးသားရာမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ wordpress နဲ့ Website တစ်ခု၊ Blog တစ်ခု ဘယ်လိုရေးသားလို့ရတယ်ဆိုတာ အသေးစိပ်ရေးသား ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့သမားတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
Maung Pauk at 2:10:00 AM 4
Download Links: Reupload 8.4.2013
Joomla ဖြင့် website ရေးခြင်း
Maung Pauk at 5:55:00 PM 3
Joomla ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ရေးသားဖို့အတွက် အခြေခံပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ရေးသားထားတဲ့ ebook လေးပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အခုမှစတင်လေ့လာလိုသူ အတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
"သင်ဟာ website တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းရေးတတ်သူ တစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီစာအုပ်ဟာ သင့်အတွက် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး..
ဒီစာအုပ်ဟာ.. website တစ်ခုကို တစ်ခါမှ မရေးဖူးသေးသော... joomla နဲ့လည်း ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိသော.. domain တို့ hosting တို့ google apps သုံးတာတို့ဘာမှ မသိသောသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Absolute beginner များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်။ သင်ဘာမှမသိထားလေးလေ ဒီစာအုပ်က သင့်အတွက်ဖြစ်လေလေပါပဲ။ များများသိလေ ဖတ်ဖို့မလိုလေလေပါပဲ။" စတဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို တကယ့် beginner တွေအတွက် စေတနာတွေနဲ့ ရေးသားထားတာပါ။ ရေးသားသူကတော့ Moe Myint Shein ဖြစ်ပါတယ်။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်သမားများအတွက် တစ်ခုခုတော့ အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
minus တစ်ခုမှာပဲတင်ထားပေးပါတယ်။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...
Down Load From Minus
How to make Myanmar Blog ( မြန်မာဘလော့တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း) စာအုပ်
Maung Pauk at 5:31:00 PM 5
ကိုညီလင်းဆက်ရေးတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတစ်ခု ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစာအုပ်နဲ့ပဲ ဘလော့ကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီးမှ ဘလော့ကို ဆင်ယင်း ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဒါတောင် ဘလော့ကို ဆင်ရင်း ဆင်ရင်းနဲ့ ပို့စ်တွေတောင် မတင်နိုင်သေးပါဘူး။ အခြားအကူအညီတွေလည်းလိုပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကတော့ သာမန် ဘလော့တစ်ခု တည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်နည်းတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ အခြား ဘလော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း တင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ minus တစ်ခုတည်းမှာပဲတင်ပေးထားပါတယ်
Download : (Reupload 28.5.2013)